Fitaovana milina indostrialy - Fitaovana vita amin'ny vy sy plastika | PTJ Shop
Home > Karazana fitaovana
Fitaovana sy za-draharaha hanolotra safidy milina sy fitaovana bebe kokoa
ary ny fisafidianana ireo fitaovana CNC mety ao amin'ny PTJ Shop
Ny mpanjifan'ny PTJ Shop dia manana fahalalahana mamaritra ireo singa amin'ny karazany an-jatony metaly ary plastika.
Misy fetrany ny habe sy ny hatevin'ny metaly sy plastika sasany satria tsy ny faritra rehetra no azo atao amin'ny fitaovana rehetra.
Ny milina manokana dia misy karazana sanganasa mahagaga.
Ny fanarahana io fenitra io dia mitaky fanoloran-tena miavaka amin'ny loharanon-karena amin'ny famokarana. Ny safidy isan-karazany amin'ny teknolojia momba ny milina ao amin'ny tranombokin'ny milina PTJ Shop dia tohanan'ny fahaizan'ny fitaovana ao an-trano izay mampifanaraka ny fitaovana amin'ny toetra mampiavaka ny fitaovana tsirairay. Ao ambadik'izany rehetra izany dia misy mpiasan'ny injeniera sy manam-pahaizana momba ny milina miaraka amin'ny firaketana an-tsoratra 10+ taona amin'ny fampifanarahana amin'ny alloys vaovao sy ireo fitaovana efa andramana sy tena izy.
Manome fihodinana ary fikosoham-bary, Axis 3 , 3 + 2 axis & mazak mitohy Masinina cnc axis 5.
Manaiky asa kely na lehibe izahay, ny isa farafahakeliny ho an'ny filaminana dia 1.
Matetika misy fotoana fohy mitarika 2-3 andro.
Ny fotoana fitarihana mahazatra dia 2 herinandro.
Contact ny machining fitaovana masinista anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo faritra sarotra aminao.
PTJ dia manana laza tsara amin'ny fametahana amin'ny milina tsara ireo fitaovana tsy tian'ny mpamokatra hafa. Ny mpanjifa dia afaka mamolavola am-pahatokisana amin'ny fitaovana vaovao, azo antoka amin'ny fahalalana fa ny PTJ dia afaka milina na dia ireo karazany faran'izay hafahafa indrindra aza, ho an'ny kalitao, valiny mahomby.
▶ Fandeferana amin'ny milina hatramin'ny ± .0005 ″.
▶ Natokana hitazomana ny kalitao tsy tapaka amin'ny alàlan'ny fampiharana ny masinina fanaraha-maso kalitao henjana.
▶ TESTIMONIANA HO AN'NY MPITONDRA FITIAVANA TSIKA
Contact ny Fivarotana milina cnc hiresaka momba ny filan'ny milina ilaina anio.
View Detail >> 21 View Derambony >>